Wararka - Sidee warshadaha cuntada uga faa'iideystaan ​​musqulaha?
Caafimaadka iyo ladnaanta malaayiin waxay kuxirantahay awooda soo saarayaasha iyo baakadaha baakadaha si ay u ilaaliyaan jawi nabdoon oo nadiif ah inta lagu jiro wax soo saarka. Tani waa sababta xirfadlayaasha qaybtan looga qabto heerar aad uga adag marka loo eego warshadaha kale. Iyada oo rajooyinka noocaas ahi ay ka imanayaan macaamiisha iyo hay'adaha sharciyeynta, ayaa waxaa sii kordhaya shirkadaha cuntada ee doorta isticmaalka nadaafadda.
Sidee ayuu qolka nadiifintu u shaqeeyaa?
Nidaamyada shaandhaynta iyo hawo qaadashada oo adag, qolalka nadiifka ah gebi ahaanba waa laga xiray inta kale ee soo-saarka; ka hortagga faddaraynta Kahor inta aan hawada lagu shubin hawada sare, waa la sifeeyaa si loo qabto caaryada, siigada, caariyaadka iyo bakteeriyada.
Shaqaalaha ka shaqeeya qolka nadaafadda waxaa looga baahan yahay inay u hoggaansamaan taxaddarro adag, oo ay ku jiraan suudh nadiif ah iyo waji duubis. Qolalkaani waxay sidoo kale si dhow ula socdaan heerkulka iyo huurka si loo hubiyo cimilada ugu wanaagsan.
Faa'iidooyinka qolalka nadiifka ah ee ka jira warshadaha cuntada
Musqulaha waxaa laga heli karaa codsiyo badan oo dhan warshadaha cuntada. Gaar ahaan, waxaa loo isticmaalaa hilibka iyo tas-hiilaadka caanaha, iyo sidoo kale ka shaqeynta cuntooyinka u baahan in laga dhigo gluten iyo laaktoos lacag la'aan ah. Adoo abuuraya jawiga ugu nadiifsan ee suurtagalka ah ee wax soo saar, shirkaduhu waxay u fidin karaan macaamiishooda nabadda maskaxda. Kaliya maahan inay alaabadooda ka ilaalin karaan faddarayn, laakiin waxay dheereyn karaan nolosha shelf waxayna kordhin karaan waxtarka.
Saddex shuruudood oo lagama maarmaan ah waa in loo hoggaansamo marka lagu shaqeynayo qol nadiif ah.
1. Dusha sare ee gudaha waa inay noqdaan kuwo aan nadiif ka ahayn noolaha, isticmaal alaab aan abuurin jajab ama siigo, noqda mid jilicsan, dillaacsan oo burburin kara iyo waliba fududeyn in la nadiifiyo.
2. Dhammaan shaqaalaha waa in si buuxda loo tababaray ka hor intaan la oggolaan marinka qolka nadiifinta. Maaddaama ay tahay isha ugu weyn ee wasakheynta, qof kasta oo galaya ama ka baxaya meesha waa in si heer sare ah loo maareeyaa, iyadoo la xakameynayo inta qof ee qolka soo galaya waqti la siiyay.
3. Nidaam wax ku ool ah waa in la sameeyaa si loogu wareejiyo hawada, iyadoo qolka laga saarayo waxyaalaha aan loo baahnayn. Marka hawada la nadiifiyo, dib ayaa loogu soo celin karaa qolka.
Maxay yihiin soosaarayaasha cuntada ee maalgalinaya tikniyoolajiyadda nadaafadda?
Marka lagu daro shirkadaha ka dhex shaqeeya hilibka, caanaha iyo warshadaha baahiyaha gaarka u leh cuntada, soo saarayaasha kale ee cuntada sameeya ee adeegsanaya tikniyoolajiyadda nadaafadda waxaa ka mid ah: Goynta miraha, Khudradda miraha iyo khudaarta, Sonkorta iyo macmacaanka, Foornooyinka, Diyaarinta wax soo saarka badda.
Intii lagu jiray muddadii hubanti la'aanta ee ka dhalatay faafitaanka cudurka 'coronavirus', iyo kororka dadka doonaya cunnooyinka u gaarka ah cuntada, iyadoo la ogyahay in shirkadaha ka tirsan warshadaha cuntada ay isticmaalayaan musqulo si aan caadi ahayn loo soo dhaweynayo. Airwoods waxay macaamiisha siisaa xalka xiritaanka qolka nadiifinta ee macaamiisha waxayna fulisaa adeegyo dhan iyo isku dhafan. Oo ay ku jiraan falanqaynta dalabka, qaabeynta qorshaha, oraah, amarka wax soo saarka, gaarsiinta, hagida dhismaha, iyo dayactirka isticmaalka maalinlaha iyo adeegyada kale. Waa adeeg bixiyaha nidaamka xayndaabka qolka nadiifinta.
Waqtiga boostada: Nofeembar-15-2020